Famonoana ireo teratany frantsay telo mianaka: olona telo voaheloka higadra mandra-pahafatiny | NewsMada
Ny sazy faran’izay mavesatra indrindra no nanamelohan’ny fitsarana ambony tao Toamasina ireto telo mianadahy. Voarohirohy tamin’ilay vonoan’olona mahatsiravina, nahafaty ilay teratany frantsay, Françisco Lopez sy ny vadiny ary ny zanany vao 7 taona monja ; gadra an-terivozona mandra-pahafatiny azy ireo.
Nahasarika ny sain’ny maro tao Toamasina ny fotoam-pitsarana nandeha tao amin’ny fitsarana ambony, omaly. Ady heloka bevava momba ilay raharaha famonoana tamin’ny fomba feno habibiana ny teratany goadelopeanina, mizaka ny zom-pirenena frantsay, antsoina hoe Françisco Lopez, 64 taona, sy ramatoa vadiny Malagasy, Soa Monica, 48 taona, ary ny zaza natsangan’izy ireo vao 7 taona izany. Nitranga tao trano fonenan’izy ireo, ao Dépot IV, Analakininina Toamasina, ny 6 mey 2019.
Efatra mianadahy no voarohirohy, saingy ny telo tamin’ireo ireto niharan’ny sazy henjana ireto : Misizansy Razaka, mpiambina ny tranon’ireo vazaha, sy Rasoanadrasana Esperance, vadiny ary Bary Jean, anadahin-dramatoa io. Tsy naharesy lahatra ny mpitsara sy ny mpitsara mpanampy, ary ny fampanoavana ambony ny fiarovan-tenan’izy ireo ka izao izy ireo tsy afa-bela izao. I Bary Jean no nisahana ny famonoana an’i Francisco Lopez tao anaty magazay
fitehirizan’entana. Razaka kosa no nanao ny famonoana an’i Soa Monica sy ny zanany 07 taona tao an-tranon’izy ireo. Nanara-maso ny manodidina kosa Rasoanadrasana Esperance. Roa volana taorian’ity vonoan’olona ity, notsimponin’ny polisy tsikelikely tany am-pandosirana tany Manakana Masomeloka, Mahanoro… izy telo miaotra ireo.
Onitra 100 tapitrisa Ar…
Tsiahivina fa herinandro taorian’ny namonoan’izy ireo ireto vazaha telo mianaka ireto vao tsikaritry ny manodidina ny zava-nitranga, noho ny fisian’ny fofona maimbo nivoaka tao amin’ny tranon’izy telo mianaka.
Noahafan’ny fitsarana madiodio noho ny fisalasalana kosa ny olona iray, voalaza fa nividy ny ordinatera entin-tanana iray. Anisan’ireo entana very taorian’ity fandrobana sy vono olona ity. Marihina fa niaiky heloka izy ireo nandritra ny famotorana nataon’ny polisy sy ny fakana ambavany nataon’ny mpitsara mpanao famotorana. Nosazian’ny fitsarana handoa onitra 100 tapitrisa Ar sy tsy fahazoana mandia faritany ireto olona telo ireto. Nahatratra 11 be izao ireo olona nantsoina ho vavolombelona tamin’ity raharaham-pitsarana, omaly ity.
Sajo & M.R.